इटहरी / साताको दोस्रो दिन सोमबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुन तोलामा ६० हजार ५०० मा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार पनि सुन यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । यस्तै �
इटहरी / साताको पाचौँ दिन बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २०० रुपैँयाले घटेको छ । बुधबार ६३ हजार ३०० रुपँयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज घटेर ६३ हजार १०० भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । तेजावी सुन भने आज ६२ हजार ८००
फिदिम / पाँचथरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि खनिज पदार्थ प्रयोग गरेबापतको बिक्री कर तिर्न मानेका छैनन् ।यहाँ निर्माणाधीन पाँच जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबमोजिम बिक्री कर जिल्ला समन�
फेरी बढ्यो सुनको भाउ, आजको कति ?
इटहरी / साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ ४०० रुपैँयाले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको भाउ तोलमा ६२ हजार ५०० मा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार सुनको भाउ तोलमा ६२ हजार १०० मा कारोबार भएको थियो । यस्त
फेरि बढ्यो सुनको भाउ,आजको कति ?
इटहरी / साताको तेस्रो दिन मंगलबार सुनको मूल्य एक सय रुपैँयाले बढेको छ । सोमबार ६१ हजार ४ सय रुपैँयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज बढेर प्रतितोला ६१ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । तेजावी सुन भने प्रतितोला ६१ हजार २ सय रुपैयाँमा का�
काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनाको तस्बीर हेर्दा मुलुकमा निर्यातभन्दा उपभोग (आयात) को अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ । गतवर्षको यसै अवधिमा नेपालबाट १०.१ प्रतिशत निर्यात थियो भने यस वर्ष �